नेपालमा ३४ लाख दमरोगी, हरेक १० जनामा एकजनालाई दम | Suvadin !
नेपालमा ३४ लाख दमरोगी, हरेक १० जनामा एकजनालाई दम
Nov 21, 2019 09:26
काठमाडौं । देशभर ३४ लाख दमरोगी भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । यो कुल जनसंख्याको ११ दशमलव ७ प्रतिशत हो ।
नसर्ने रोगको प्रकोप बढिरहेका वेला नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले हालै श्वासप्रश्वाससम्बन्धी दीर्घरोग दम (सिओपिडी), मिर्गौला र मुटुरोगबारे अनुसन्धान गरेको थियो ।
सबै क्षेत्रका जनसंख्या समेटेर सातै प्रदेशका ७२ जिल्लाका १३ हजार दुई सय व्यक्ति छनोट गरेर सिओपिडीबारे अध्ययन गरेको थियो । तीमध्ये ११ दशमलव ७ प्रतिशतमा दम देखिएको थियो ।
वीर अस्पतालका चेस्ट युनिट प्रमुख डा. आशेष ढुंगानाले देशभर ३४ लाख दमरोगी भएको बताए । नसर्ने रोगमध्ये दम नेपालमा सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालमा प्रत्येक १० व्यक्तिमा एकजनालाई दम छ ।
आवश्यक जनशक्ति र सम्बन्धित रोगको उपचार गर्ने अस्पताल अभावले दमरोगी बढिरहेको डा. ढुंगानाले बताए । नेपालको कुल मृत्युमध्ये १२ प्रतिशत मृत्युको कारण दम रहेको पनि उनले बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले बुधबार देशमा दमको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएको छ । अध्ययनले दमको मुख्य कारण धूम्रपान रहेको देखाएको छ ।
बाह्य र घरभित्र हुने वायु प्रदूषण पनि दमको कारण भएको देखाएको छ । त्यस्तै, पेसागत र वंशाणुगत कारणले पनि दमको समस्या देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । करिब तीन प्रतिशत दमका रोगी मात्रै सही उपचारमा संलग्न भएको अध्ययनले जनाएको छ ।